တစ်ဦးရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေး pair တစုံအတွက်သဟဇာတမရှိခြင်းသေးချစ်သူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဟဇာတမ၏ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားတော့မဟုတ်ပါဘူး, နှင့်မိတ်ဖက်များ၏တဦးတည်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်တစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အဲဒီအကြောင်းအတှေးတစ်ကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် လိင် , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ, အကျိုးစီးပွား, စိတ်ကူးယဉ်။ အဘယ်အရာကိုယခင်ကတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုခဲ့သောကြောင့်လုံးဝပုရငျးနှီးဝိညာဉျကိုညှို့မထိခိုက်ပါဘူးယခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိုးဖောက်မှုများ၏သဘောသဘာဝအကြောင်းပြောဆိုပါလျှင်၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး၏အသက်တာ၌အချို့သောဇီဝကမ္မဇာတ်စင်၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏စီးဆင်းမှုနှောင့်ယှက်, စိတ်ဖိစီးမှုခွအေနမြေားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်ယင်း၏ပျောက်ဆုံးမှု၏ပြင်းထန်မှုအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုသွေးဖိအားကိုလျှော့ချကြောင်းဆေးကိုလက်ခံရရှိ, အသက်-related အပြောင်းအလဲများကို၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည်။ အရေးကြီးအကြောင်းပြချက်သူတို့ကိုဒဏ်ရာတင်ပါးဆုံတွင်းရောင်ရမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမညီမျှမှုစိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, "လုပ်ကွက်" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးပေါ်ပေါက်ရေး။
ထိုမိန်းမသည်ကိုသိလိုခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မရှိခြင်းသတိထားမဟုတ်ပါပေမည်။ အဆုံးစွန်သော, အလှည့်အတွက်ရောထွေးပုဂ္ဂိုလ်ရေး, လိင်အင်္ဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။ မကြာခဏ Post-သွေးဆုံးတွင်တွေ့မြင်လိင်အင်္ဂါ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ, လိင်စိတ်နိုးထအလွန်လေးနက်သောအရာတစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်, ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုထိနေချိန်မှာသတိထားမိနိုင် လျှော့ချအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်တုံ့ပြန်မှု ၎င်းတို့၏သဘာဝအလိင်စိတ်နိုးထအကြောင်းကိုတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့။ ရောထွေးရောဂါနှင့်အတူအမြိုးသမီးတမူမမှန်၏တည်ရှိမှုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ခက်ခဲသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုသို့မဟုတ်အပြုအမူ၏ disorders
သူတို့ဟာစသည်တို့ကို sado-masochistic သဘောထားတွေ, တယောက်, ရှင်းပြချက် :. မျိုးရိုးဗီဇ, ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇကိုအဆင့်မှာ Disorders ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူလိုက်နာမပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လုပ်ရပ်များမှာသူ့ဟာသူတငျပွ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ, လိုက်လျောညီထွေအတွက်အခက်အခဲတစ်ခုစိတ်ဖိစီးမှုခွအေနကေိုကိုယ်တိုင်ကဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
စအိုအို rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အမြီး။ ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးရင်းနှီးအလှဆင်လိုအပျသလဲ
စုန်း Hazel ထုတ်ယူ
စိန့်ဂျော့ခ်ျ - အနိုင်ရမှစိန့်ဂျော့ဂ်ျ၏ပဌနာ
Croutons နှင့်အတူသုပ် - တစ်အရသာ crunchy ရေစာများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ဆောင်းရာသီအတွက် hydrangeas ဖုံးကွယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဇနီး Salma Hayek ဆေးရုံများတွင်ဆင်းသက်!
လက် roasting ဘို့မီးဖို၌ Skewers
Crucifer ခွေးလှေး - ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံ